ठूलो रहस्योदघाटन! सेरेनाले छोरीलाई जन्म दिने
ठूलो रहस्योदघाटन! सेरेनाले छोरीलाई जन्म दिने
पेरिस, जेठ १९ (एजेन्सी) print
विश्व चर्चित महिला टेनिस खेलाडी सेरेना विलियम्सको छोरी जन्मिन लागेको रहस्योदघाटन उनकै दिदी भेनसले गरेकी छिन्।
गर्भवती भएका कारण सेरेनाले यसपालिको फ्रेन्च ओपनमा भाग लिइनन्। दिदी भेनस वर्षको दोस्रो ग्रान्ड स्लामको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेपछि उनले यसको रहस्योदघाटन गरिन्। उनले गल्तीले आफ्नो बहिनीको विषयमा सबै कुरा बताएकी हुन्।
यसअघि सेरेनाले सोशल साइटमा आफ्नो तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि उनी गर्भवती हुन लागेको रहस्य खुलेको थियो। भेनसले टेलिभिजनसँगको साक्षात्कारमा सेरेनाको छोरीले भविस्यमा आफूलाई मनपर्ने ‘आन्टी’ भनेर सम्बोधन गर्ने भनेपछि सबै कुरा सार्वजनिक भएको हो।
‘हामी सबैलाई छोरी मनपर्छ। उनको नाम हाम्रो अगाडिको नामबाट होस भन्ने चाहन्छौँ,’उनले भनिन्। सेरेनाले यसअघि आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चाको लिङको जानकारी दिन अस्विकार गरेकी थिइन्। २३ पल्ट ग्रान्ड स्लाम जितेर इतिहास रचेकी अमेरिकी टेनिस खेलाडीले गत अप्रिलमा आफू गर्भवती भएको जानकारी दिएकी थिइन्।
सेरेना गत बुधबार आफ्नो दिदीको पहिलो राउण्डमो खेल हेर्न पेरिस पुगेकी थिइन्। उनले ३ पल्ट फ्रेन्च ओपन जितिसकेकी छिन्। बच्चालाई जन्म दिएपछि २०१८ मा पुनः टेनिस कोर्टमा फर्किने उनले पहिले नै प्रतिबद्धता दोहर्याइसकेकी छिन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १९, २०७४ १७:१९:५१